” भन्दिनु है बा ! ” को लोकार्पण::KhojOnline.com
” भन्दिनु है बा ! ” को लोकार्पण
अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आउनु भएकी कवि शकुन ज्ञवालीको कविता सङ्ग्रह ” भन्दिनु है बा ! ” को लोकार्पण नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङगाप्रसाद उप्रेतीले गर्नु भयो । कार्यक्रम समितिका उपाध्यक्ष दिव्य गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बाग्मती समितिले आयोजना गरेको सो समारोहमा कुलपति उप्रेती, नेपाल सरकारका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अनेसासका केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली, मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष प्राडा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल, नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्य, साहित्यकारहरु दामोदर पुडासैनी, गीता मैनाली र उपाध्यक्ष गिरीलगायतले आआफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
अनेसास न्युयोर्क च्याप्टरले प्रकासन गरेको “भन्दिनु है बा ! ” कविता सङ्ग्रहबाट केही कविताहरु वाचन पनि गरिएको थियो । साथै सो लोकार्पण समारोहमा गायिका कमला रिसाल वि. क. ले गीत गाउनु भएको थियो भने साहित्यकार सुमन बर्षाले कार्यक्रम सन्चालन गर्नु भएको थियो ।
सोही समारोहमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेती, प्राज्ञहरु दिनेशराज पन्त र डा. उषा ठाकुरलाई अनेसासको तर्फबाट बधाई ज्ञापनसमेत गरिएको थियो ।
समारोहमा साहित्यकारहरु ललिता दोषी, सविता गौतम दाहाल, उषा तिवारीलगायतलाई अनेसासको आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो ।
कवि शकुन ज्ञवालीले कविता, मुक्तक, गीत र गजल लेख्नु हुन्छ । उहाँका पालुवा र मन्जरी, तिमी र म जस्ता कविताका कृतिहरु यसअघि नै प्रकाशित भएका छन भने दर्जनौं गीति एलबमहरु पनि निस्किएका छन । उहाँ अनेसास न्युयोर्क च्याप्टरका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
शनि, पुस १४, २०७५ मा प्रकाशित
साहित्यिक मैत्रीपूर्ण भलिबल खेल नुवाकोटमा सम्पन्न
काठमाडौँ, जेठ १७ गते शुक्रबार । संसाक मासिक र साहित्यकार खेलकुद समाज नेपालको आयोजनामा श्रीजनज्ञान निकेतन मा.वि., थानापति, नुवाकोटमा साहित्यकार र शिवपुरी गाउँपालिका भित्रका शिक्षकहरूको बीचमा मैत्रीपूर्ण भलिबल खेल सम्पन्न भयो । खेल उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, रामकृष्ण थापाले साहित्यकार तथा विद्वान मित्रहरूसँगको सामिप्यमा यसरी खेल खेल्न...